Imithetho emitsha yeMida yeeNdwendwe zaseCanada: I-10 yaseMelika izokwamkela abantu baseCanada ngezandla ezivulekileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Imithetho emitsha yeMida yeeNdwendwe zaseCanada: I-10 yaseMelika izokwamkela abantu baseCanada ngezandla ezivulekileyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • LGBTQ • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Abantu baseMexico nabaseCanada ngoku banokucwangcisa iholide yaseMelika eMelika. Ukusukela nge-1 kaNovemba, uKhuseleko lwasekhaya e-US luza kuvula kwakhona umda phakathi kwabamelwane base-US kuhambo olungabalulekanga, kubandakanya ukhenketho.
I-White House iqinisekisile ngolwe-Lwesibini ebusuku ukuba zigonywe ngokupheleleyo iindwendwe ezivela eCanada ziya kuba nakho ukuya e-United States kwimida yokuwela umhlaba ukusukela nge-1 kaNovemba.
Akuchazwanga ukuba zeziphi izitofu zokugonya eziza kwamkelwa okanye ukuba ngaba iidosi ezixubeneyo ziya kufaneleka.
Imida yase-US yabatyeleli baseMexico iya kuvulwa ngo-Novemba 1
Abo banikezela ubungqina bokugonywa kwaye bajonge ukutyelela iintsapho okanye abahlobo abafikayo njengabakhenkethi okanye abathengi baya kuvunyelwa ukuba bangene eMelika kwakhona ngo-Novemba.
Umongameli wase-US u-Biden uphakamise isibhengezo esifanayo kubantu bamanye amazwe abafuna ukuya kwilizwe liphesheya, kubandakanya i-Yuropu.
Ukuphakanyiswa okufanayo kwezithintelo kuya kusebenza kwimida yomhlaba phakathi kwe-United States neMexico.
Eli linyathelo lokwamkela ukuvulwa kwakhona kweShishini lezoKhenketho laseMelika laseMelika.
Ngaphambi kwesi sifo ngo-2019, bekukho malunga nezigidi ezingama-20.72 zeendwendwe ezivela eCanada zisiya eUnited States.
Ngaphezulu kwe-4.1 yezigidi zabantu baseKhanada batyelela eFlorida minyaka le kubandakanya iindwendwe zexesha elifutshane kunye neebusika ezininzi zasebusika zexesha elide.
Ngaphezulu kwezigidi ezi-3.1 zabantu baseKhanada batyelela eNew York minyaka le. Umtsalane # 1 ngokuqinisekileyo sisiXeko saseNew York, Esinye sezona zixeko zibalaseleyo emhlabeni, iNew York ihlala isisaqhwithi somsebenzi, kunye neendawo ezaziwayo kuyo yonke indawo kwaye kungaze kubekho ixesha elaneleyo lokuzibona zonke kubandakanya imiboniso ebanzi, yodidi lwehlabathi Ukuthenga, iSitatimende seNkululeko, i-Empire State Building, iBrooklyn Bridge, iCentral Park kunye neemyuziyam ezidumileyo zehlabathi.
Ngaphezulu kwezigidi ezi-2.5 zabantu baseCanada batyelele ilizwe laseWashington minyaka le ngokufikelela ngokulula kumda wephondo laseBritish Columbia. I-Seattle yindlela yokungena kummandla wePacific Northwest, apho iindawo ezintle zeentaba zijonga amahlathi amaninzi kunye neendawo ezinxweme. Iipaki ezimbini zikazwelonke, iNtaba iRainier kunye neOlimpiki, zibonelela ngokudibana kwendalo njengakwiziqithi zeSan Juan kufutshane nonxweme.
Ngaphezulu kwesigidi esi-1.6 samaKhanada esiya eCalifornia minyaka le. Iidolophu ezinamandla, iilwandle, iipaki zokuzonwabisa, kunye nezinto ezimangalisayo zendalo ezifana naphi na apha emhlabeni zenza iCalifornia ilizwe elinomdla elinokubakho kubahambi. Izixeko zesango laseSan Francisco naseLos Angeles zihlala kwezinye zeziza ezaziwayo zikarhulumente, ukusuka eGolden Gate Bridge ukuya eHollywood naseDisneyland.
Ngaphezulu kwesigidi esi-1.3 samaKhanada ndwendwela iNevada minyaka le, uninzi lwabo lufika eLas Vegas. Indawo ezimangalisayo zeNevada zihlala zigutyungelwe bubukhazikhazi kunye nesixeko sayo esikhulu, iLas Vegas. INevada yimeko yokwahluka kwendalo okumangalisayo, enendawo ezininzi zokundwendwela, ukuqhuba okuhle, kunye namathuba amahle emisebenzi yangaphandle kwiipaki zabo zesizwe ezintle kunye neendawo zolonwabo.
Ngaphezulu kwe-1.3 yezigidi zabantu baseCanada batyelela eMichigan minyaka yonke kunye nabahambi abaninzi basehlotyeni abaqhuba bevela e-Ontario. IMichigan likhaya lembonakalo entle, amachibi amahle, ukutya okumnandi, indawo ezi-quirky kunye neempawu ezifihlakeleyo. Lo mda umangalisayo wemida u-4 wamaLwandle amaKhulu kwaye uqulethe ngaphezulu kwama-11,000 amachibi angaphakathi elizweni, asasazeka kwiipeninsula zayo ezisezantsi neziphezulu ezenza indawo eshushu ehlotyeni kubantu baseCanada.
Ngaphezulu kwesigidi esinye baseCanada batyelela iArizona minyaka le ukusuka kwiindwendwe zexesha elifutshane ukuya kwiinyoni ezinde zekhephu. Kwintliziyo yaseMelika eseMazantsi mpuma, iArizona igcwele imimangaliso yendalo, izixeko ezinobungqingili kunye needolophu ezincinci ezinomtsalane. Eli lizwe linayo yonke into ukusuka kwiGrand Canyon, amatye abomvu kaSedona, ilizwe lewayini, amachibi amangalisayo, ukunyuka intaba, iinduli zasebusika, iminyhadala yemidlalo yodidi lwehlabathi kunye nemozulu emangalisayo.
Ngaphezulu kwama-800,000 amaKhanadi atyelela eHawaii minyaka le. Iziqithi zaseHawaii ziyaziwa ngemihlaba yazo emixawuka yamawa, iingxangxasi, amagqabi akweleenjiko kunye namanxweme anegolide, obomvu, omnyama kunye neesanti eziluhlaza. Unyaka wonke kufutshane nemozulu egqibeleleyo kunye nendlela entle yokuphumla eyenze iHawaii yaba yindawo yokubaleka ebusika kubantu baseKhanada! Iziqithi ezithandathu ezizodwa zibonelela ngamava ahlukileyo anokulukuhla nawuphi na umhambi.
Ngaphezulu kwama-750,000 amaKhanada atyelela eMaine minyaka le. Phantse umntu omnye kwabathandathu abatyelele iMaine bavela eCanada, phantse isiqingatha sabo bevela e-Ontario. Umbuso waseMaine, obizwa ngokuba yiVacationland, ungaphezulu kwendawo ekuyiwa kuyo, ngamava aya kuthatha umphefumlo wakho. IMaine yamkela konke okuyinyani, eyahlukileyo kwaye ilula, kwaye bonwabela iindawo ezivulekileyo zemithi enzulu yelizwe kunye nonxweme oludlamkileyo.
Ngaphezulu kwama-680,000 amaKhanadi atyelela iPennsylvania minyaka le. Iidolophu zasePennsylvania ezinobunkunkqele kunye nezinto ezintle ezinomtsalane zangaphandle zikukhuthaza ukuba uphonononge imisebenzi eyahlukeneyo. Ungayibona eyaziwayo iNkululeko yentsimbi ePhiladelphia, uhambe ezinyathelweni zamagorha eMfazwe aseKhaya awileyo eGettysburg, okanye uthabathe inkcubeko kwiiMyuziyam zaseCarnegie ePittsburgh.